Borussia Dortmund Oo Soo Diiday Dalab Manchester United Ka Gudbisay Jadon Sancho
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBorussia Dortmund oo soo diiday Dalab Manchester United ka gudbisay Jadon Sancho
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay diiday dalab 67 milyan ginni ah oo ka yimid Manchester United oo ku aadan Jadon Sancho .
Kooxda heysata 20ka jeer hanashada horyaalka Ingariiska ayaa la rumeysan yahay inay durba heshiis shaqsi ah la gaareen da ‘yarkii hore ee Manchester City, iyadoo saxafiga Talyaaniga ah Fabrizio Romano uu sheegay in heshiis shan sano ah ay ku heshiiyeen labada dhinac.
Man United ayaan weli heshiis la gaarin Dortmund, iyadoo kooxda Bundesliga ka dhisan ay dalbanayaan € 95m (£ 82m) si ay uga helaan ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England.
Sida laga soo xigtay BBC Sport , kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa dalab 67 milyan oo ginni ah u gudbisay 21 jirkaan, laakiin waxaa si dhaqso leh u diiday BVB, oo diiday inuu ka leexato qiimaha 108 milyan ee ay xagaagii hore ku dalbanayeen.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Man United ay haatan ka fiirsaneyso inay ku laabaneyso dalab kor u kac ah, inkastoo sidoo kale uu jiro khilaaf u dhexeeya labada naadi oo ku saabsan qaab bixinta lacagta, iyadoo kooxda Premier League ka dhisan ay dooneyso inay lacagta ku kala bixiso shan sano.
Sancho, oo haatan la jira xulka England ee isku diyaarinaya bilowga Euro 2020, ayaa dhaliyay 50 gool, waxaana uu diiwaangeliyay 64 caawin 137 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa Jarmalka tartamada oo dhan.